The Gardener: Zephyr's ဖြတ်ထုံး ဆက်ထုံးများ
တနေ့သ၌ ကျွန်ုပ်သည် အင်မတန်အားလပ်နေလေရာ ... ကျွန်ုပ်ဘာသာရေးထားသော ပို့စ်ကို Google တွင်ရှာလေရာ ကျွန်ုပ်နာမည်မှအပ အစစအရာရာတူသော ဖော်ဝပ်မှရသည်ဆိုသည်များကိုတွေ့လေသည်။ ထိုအခါမှ အင်မတန်ညံ့ဖျင်းသောကျွန်ုပ်သည် နာမည်ကို ကော်ပီကူးရာတွင် အခက်တွေ့နေတတ်သည့် လူတစ်ချို့အတွက် ကော်ပီပေ့စ်ရက်တိုသင်တန်းဖွင့်ရန် အကြံရလေသည်။
နာဗားနား အဖွဲ့က ကာ့ထ်ကိုဘိန်းကပြောတယ် ..........................
သူဘာအစိမ်းရောင်မှ မစားဘူးတဲ့ ......။ သူ့ရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ပါပဲ ........။ တစ်ချို့ဘလော့ခ်တွေမှာ Comment ရေးလို့မရဘူး ...။ Online မှာပဲရေးရေး၊ စာမျက်နှာပေါ်မှာပဲရေးရေး ရေးတဲ့သူရဲ့ ethic ရှိပါတယ်။ ဖတ်တဲ့သူရဲ့ ethic လည်းရှိရပါမယ်။ Mutual Respect လည်းရှိရပါမယ်။ ဒါတွေမှမရှိရင်တော့ စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဥာဏ် အတော်လေး ချွတ်ခြုံကျတာပဲလို့တွေးမိပါတယ်။
Misbelief ... လူတွေမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းယုံတာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အိမ်မက်ထဲမှာမြွေတွေ့ရင်ငွေဝင်မယ်။ မြွေကိုသတ်ရင်ငွေထွက်မယ်။ အညစ်အကြေးတွေတွေ့ရင် ငွေရမယ်။ ၀တ်ကောင်းစားလှနဲ့အိပ်မက်ထဲမှာတွေ့ရရင် အဲဒီလူသေပြီ ...စသဖြင့် ...။ စင်ကာပူမှာတော့ အတော်လေးထူးခြားတဲ့ ယုံကြည်မှုတစ်ခုတွေ့ရတယ်။ Train is coming , Train is coming လို့သီချင်းဆိုပြရင် ရထားတွေချောင်လာမယ်လို့ အစိုးရကမျှော်လင့်ယုံကြည်နေရှာတယ် ........။ Love your rides (.. before you become suffocating in the train.)
Gallaxhar ကိုသိကြလားမသိဘူး။ ကာတွန်းကားကြည့်ရင်တော့သိလိမ့်မယ်။ ကာတွန်းကားကို ကြိုက်တာကလေးတွေတင်မဟုတ်ပါဘူး။လူကြီးတွေပါကြိုက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကာတွန်းကားတွေမှာ သရော်တဲ့အငွေ့အသက်တွေပါတယ်။ ဘာသာရေး၊လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအများကြီးပါတယ်။ Monsters Vs Aliens ထဲမှာ Gallaxhar က လူဆိုးပါ။ အဲဒီမှာ သူလုပ်ထားတဲ့ clone တွေက Hail Gallaxhar လို့အော်တာကို သိပ်ရယ်ရပါတယ်။ Hitlar ကြီးကိုနောက်တာပါ။ နာဇီတွေအော်သလိုမျိုး သူ့ကလုန်းတွေက အော်ပါတယ်။ သူclones တွေထွင်တာကလည်း Bible ထဲက God ပုံစံတူဖန်ဆင်းတာကို နောက်ထားပုံရပါတယ်။ Clones လုပ်ဖို့ သူ့ကိုယ်သူ Stamp ရိုက်သလို ဒုံးဒုံးဆိုပြီး ထုချလိုက်တာကလည်းအတော်ရယ်စရာကောင်းပါတယ်။ Gallaxhar ပြောတာလေးတစ်ခုကို သဘောကျပါတယ်။
Humans of Earth, I come in peace. You need not fear me, I mean you no harm. However, it is important to note that most of you will not survive the next 24 hours. The few of you that do survive will be enslaved and experimented upon. You should, in no way, take any of this personally. It's just business. So to recap, I come in peace, I mean you no harm, and you all will die. Gallaxhar out.
အဲဒါဟာ ချိန်းခြောက်တာလား ကြေငြာတာလားမကွဲပြားပါဘူး။ အင်မတန်သဘောကျမိပါတယ်။
အခုရုံးမှာ အလုပ်များတယ်ဆိုတာ အရင်ရုံးမှာ အားနေသလောက်ပဲရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ပိုနေတဲ့အချိန်တွေကို စာဖတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေတွေ့ပါတယ်။ Roy Fielding ရဲ့ အယူအဆကနေပြီး REST (REpresentalional State Transfer) နဲ့ပတ်သက်တာတွေ အများကြီးပေါ်ထွန်းလာပါတယ်။ သူ PhD thesis မှာ ခက်ခဲလေးနက်တာတွေပါပါတယ်။ အခြေခံမေးခွန်းကတော့ web ကို ဘာလို့ လူတွေ အများဆုံးသုံးတာလဲ။ ဘာလို့ http ကို အားကိုးတာလဲ ဆိုတာတွေပါပါတယ်။ ဒါတွေဟာ နေ့စဉ်သုံးနေတာတွေပါပဲ။ ပန်းသီးကျလာတာကိုနေ့တိုင်းမြင်တဲ့ပန်းသီးခြံကလူတွေနဲ့မြေဆွဲအားသီအိုရီမပတ်သက်ခဲ့သလို အခုလည်း Roy က ဘာလို့ web ကို အသုံ့းများတာလဲ ဆိုတာကလေးကို မေးပြီး PhD ယူသွားပါတယ်။ အယူအဆတစ်ခုအတွက် အဖြေထက်လိုအပ်တာက မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေမြန်မာစာသင်ယူမှုမှာ လားနဲ့လဲကို မကွဲတာက အဓိကပြဿနာလို့ ဆရာတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ ဘယ်သွားမှာလဲ ကို ဘယ်သွားမှာလား လို့ပြောရင် ကလေးက အစ မှားနေမှန်းသိပါတယ်။ ဘာလို့မှားတာလဲဆိုတာတော့ ရှင်းမပြတတ်ပေမယ့်။ မြန်မာကလေးတစ်ယောက်ကတော့ လားနဲ့ လဲမေးခွန်းတွေသင်ပေးစရာသိပ်မလိုဘဲ ကြားတာနဲ့တတ်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်လေးပေမယ့် သင်လို့မတတ်တာတွေလည်းရှိတယ်။
...............Source မသိဘဲကူးယူခြင်းသည် ခိုးခြင်းမည်ပေ၏...........................
ငယ်ငယ်တုန်းက ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်တဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်က စာအုပ်တွေ အိမ်သယ်သယ်သွားပြီး ပြန်မအပ်ဘူး။ အဲဒါကို ခိုးတယ်လို့ပြောတာကို သူက လက်မခံဘူး။ ပိုင်ရှင်မသိအောင် တစ်သက်လုံးငှားတာပါကွာတဲ့။ ..... စကားလုံးကတော့လဲပြီးသုံးလို့ရပါတယ်။ ခိုးတယ်ပဲပြောပြော၊ မသိအောင်ကူးတယ်ပဲဆိုဆို ၊ပိုင်ရှင်မသိအောင် တစ်သက်လုံးငှားသွားငှားသွား ...စေတနာအရ ကံဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီကံကတော့ ဆင်ခြေပေးလို့မရဘူး။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိရပ်တည်ဖို့ဆိုရင် ဂုဏ်သိက္ခာမရှိတာတွေမလုပ်မိဖို့နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာမရှိတာတွေကို မထောက်ခံဖို့လိုပါတယ်။ Value your Dignity.
ဒီနေ့ Toa payoh မှာ သင်္ကန်းသွားကပ်ပါတယ်။ ပထမစဉ်းစားထားတာက ပင်နီစူလာကနေသင်္ကန်းဝယ်ပြီးသွားကပ်ဖို့ပါ။ နောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲသင်္ကန်းအလှူပြန်ခံပြီး သင်္ကန်းအတွက် ငွေသားလှူပြီး ထပ်လှူချင်တဲ့ ငွေသားကို န၀ကမ္မလှူလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ သင်္ကန်းလည်းလှူရာရောက်သလို န၀ကမ္မလည်းလှူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ၀ိနည်းအရ ရဟန်းတော်တွေမှာ သင်္ကန်းအစုံများများလက်ခံလို့မရပါဘူး။ အဆင်ပြေအောင်လှူတတ်ရင် ကုသိုလ်လည်းရသလို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဥာဏ်သိပ်ကောင်းလွန်းတဲ့သူတွေ ကပ်စေးလည်းနှဲပြီးကုသိုလ်ကလည်း လိုချင်ရင်တော့ ဘုန်းဘုန်းတွေဆီမှာ သင်္ကန်းအလကားအလှူခံပြီး၊ အလှူခံလို့ရတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ ပြန်လှူလိုက်လည်းရတယ်လို့တွေးနေမလားလို့ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ :P
ဆိုလိုတာက စင်ကာပူဒေါ်လာကနေ မြန်မာငွေကို ပြောင်းဖို့ကြားခံစံသတ်မှတ်မှု X လိုပါတယ်။ အခု X နေရာမှာ ခပ်တည်တည်ကြီးရပ်နေတာက USD ဖြစ်ပါတယ်။ ကံများဆိုးချင်တော့နူရာဝဲစွဲ၊ လဲရာသူခိုးထောင်း၊ သူခိုးထောင်းလို့ထလာပြန်တော့ စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့တိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက် USD က ရွှေပြည်ကြီးမှာ ဈေးကျတော်မူပါတယ်။ မြန်မာငွေကိုက ပေါက်ဈေးဘယ်သူလုပ်ထားမှန်းမသိပါဘူး။ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်တစ်ထုပ်ဟာ နှစ်ရာဆိုရင် ငွေဈေးတက်တဲ့အခါ ၁၈၀ နဲ့ဝယ်လို့ရသင့်ပေမယ့် ဒီလိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူကတင်နေချနေမှန်းမသိပါဘူး။ အရင်က ဓန Magazine မှာ ငွေကြေးအကြောင်းဆက်တိုက်ရေးနေတဲ့ ခေါင်းဖြူကြီးကိုပြန်မေးရလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အခုတော့ SGD ဈေးတက်နေရုံနဲ့မရပါဘူး။ USD ဈေးတက်ဖို့ပါ ဆုတောင်းရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် USD တက်နေကျနေတာနဲ့တိုက်ရိုက်မပတ်သက်သင့်တဲ့ စနစ်တစ်ရပ်အတွက် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ငွေဈေးမတန်တဆကျနေရင် တစ်ကျပ်မှ မလွှဲဘဲနေကြရင် ကြာကြာကျမနေနိုင်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ တကယ်တန်း တန်ဖိုးမသိတဲ့ ကျပ်ငွေဟာ တက်နေကျနေတယ်ဆိုတာဟာ လေထဲမှာ ဆောက်ထားတဲ့အိမ်မှာ ပြတင်းပေါက်ဘယ်နှစ်ခုရှိသလဲလို့မေးခံရသလိုပဲ ဖြေရခက်ပါတယ်။ USD ကနေပဲ SGD ကိုပြန်တွက်နေရင်တော့ တော်တော်ကြီးလွဲနေပါပြီ။ အခုဖြစ်နေတာက စံသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာက စံမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာပါပဲ။ ရွှေဈေးနဲ့ ဒေါ်လာဈေးအတက်အကျမတူတဲ့အခါမှာ မြန်မာပြည်က ကျသွားတဲ့ရွှေဈေးဟာ ဈေးပဲကျသွားတာဖြစ်ပြီး အဲဒီဈေးနဲ့ဝယ်လို့မရပါဘူး။ ၀ယ်ဖူးရင်သိပါလိမ့်မယ်။ ရောင်းချင်ရင်တော့ အဲဒီဈေးနဲ့ရောင်းလို့ရပါတယ်။ ကျဈေးနဲ့ဝယ်လို့မရပါဘူး။ အခုငွေလွှဲတဲ့ကိစ္စမှာတော့ အဲဒီသဘောနဲ့ဆင်ပါတယ်။ ဈေးကျနေတာကို ကျနေတဲ့ဈေးနဲ့ မြန်မာပြည်မှာဝယ်လို့မရပါဘူး။ ၇၀၆ ကျပ်နဲ့ မြန်မာပြည်မှာ စင်ကာပူတစ်ဒေါ်လာဝယ်လို့မရပါဘူး။ ?????။ သချာင်္တွေ ဆယ့်သုံးနှစ်လောက်တွက်လာပေမယ့် မြန်မာငွေတစ်ကျပ်ရဲ့တန်ဖိုးကို ဘယ်လောက်မှန်း အခု ၂၈ နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမတွက်တတ်သေးတာ အတော်လေးရှက်စရာကောင်းပါတယ်။
အလုပ်က Software Engineer ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနန္တော အနန္တခြောက်ပါးမှာ Google လည်းပါပါတယ်။ Google ကို Larry Page နဲ့ Sergey Brin ဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်က ပီအိတ်ခ်ျဓီများနည်းတူ နင်လားငါလား တော်သော Standford University က PhD ကျောင်းသားနှစ်ယောက်က စခဲ့တာပါ။ မသိတာရှိရင် ရှာလို့ရအောင် စဉ်းစားပေးတဲ့အတွက် သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေက ဘာလို့ ဒီလိုတော်ရတာလဲဆိုတာကိုနားမလည်တာ အတော်လေးကြာပါပြီ။ အခုလည်း နားမလည်ပေမယ့် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ပုံကိုတော့ သွားလေသူ ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်က ဆွဲပေးသွားပါတယ်။ အိမ်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ Performance အရ ကျွန်တော်တို့ဟာ Google မှာတစ်စုံတစ်ခုကိုရှာပါတယ် .........။ ပုံလေးနဲ့တွဲဖက်ခံစားကြည့်ပါဦး.....။
(အခုတလော သိပ်မခင်မင်တော့ဘူး။ အဲဒါကြောင့် Fonts သေးထားတာ။ :P)